မြစ်ဆုံ: သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ဂျပန်တွေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သလဲ?
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ဂျပန်တွေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သလဲ?
(၁) တိုကျိုမှာ အင်တာနက်ကလွဲပြီး တယ်လီဖုန်းတွေ သုံးလို့မရတော့ဘူး။ ကား၊ ရထားတွေအလုပ်မလုပ်တော့ လူတွေ လမ်းလျှောက်ပြန်ကြတယ်။ အစားအစာမရှိမှာဘဲ ဂျပန်တွေက စိုးရိမ်ကြတယ်။ လူတွေအစားမစားရမှာစိုးလို့ တချို့ဆိုင်တွေ ဖွင့်ပေးထားတယ်။ ဆူပါမားကက်တချို့ပဲ စင်တွေလဲကုန်လို့ ပိတ်ထားကြတယ်။
(၂) ငလျှင်ခိုလှုံတဲ့နေရာမှာ လူပေါင်းရာကျော် ခိုလှုံနေကြတယ်။ လူတွေကြားထဲမှာ ဘယ်သူမှ ဆေးလိပ်မသောက်ကြဘူး။ ကူညီတဲ့လူတွေက စောင်ပြေးယူလိုက်၊ ရေနွေးပြေးယူလိုက်၊ မုန့်ပြေးယူလိုက်နဲ့ ပြုစုနေတယ်။ ယောက်ျားတွေက တိုက်ပေါ် ပြေးဆင်းပြေးတက်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ကူညီနေကြတယ်။ ကြိုးတွေဆက်ပြီး လေဒီယိုဖွင့် သတင်းနားထောင်ကြတယ်။ နာရီအနည်းငယ်ကြာတော့ လူစုခွဲပြီး ကိုယ့်အိမ်သူအိမ်ပြန်ကြတယ်။ ခိုလှုံတဲ့နေရာမှာ အမှိုက်တစ်စက်မှ မကျန်ခဲ့ဘူး။
(၃) ငလျှင်လှုပ်ပြီးနောက် Suntory ကုမ္ပဏီက ကြေငြာတယ်။ သူတို့ရဲ့ စက်ထဲထည့်ရောင်းတဲ့ အချိုရည်တွေအားလုံး ဖရီးပါတဲ့။ 7-11နဲ့ family world အရောင်းဆိုင်ကလည်း လူတွေကို အစားအစာနဲ့ရေ ဖရီးဝေတယ်။ ရေဆာရင် စက်ထဲကအချိုရည်၊ ရေတွေကိုသောက်နိုင်တယ်။ ဗိုက်ဆာရင် အရောင်းဆိုင်တွေထဲ ဝင်စားနိုင်တယ်။ ခိုလှုံစရာနေရာမရှိရင် ဆူပါမားကက်ထဲဝင်နိုင်တယ်။ ဖုန်းဆက်မလား? လမ်းဘေးက အများပြည်သူသုံးဖုန်းကို ဖရီးသုံးနိုင်တယ်။ ဂျပန်လို နားမလည်ဘူးလား? တီဗီက တခြားဘာသာလို ဘယ်လိုခိုလှုံရမယ်ဆိုတာကို ကြေညာတယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ ကြန်အင်လဏ္ခာဖြစ်တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ဘေးအန္တရာယ်ကြုံနေချိန်ဆိုပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေကို သင်ခန်းစာတစ်ခု ပေးနိုင်လိုက်တယ်။
(၄) ဂျပန် အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန် ဂျပန်မှာနေနေတယ်ဆိုပေမယ့် ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။ တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင် လူအသေအပျောက် ဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်။ လူအသေအပျောက်ကို နည်းသထက်နည်းအောင်လုပ်နိုင်တာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံပဲရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
ဂျပန်မြေအောက်ဂိုဏ်းတွေက ကူညီမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကြေညာတယ်။ ဒီ"လူဆိုး"တွေဟာ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းသူတွေမဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ကူညီမှုက ဂျပန်အစိုးရထက် ပိုများနိုင်တယ်လို့ ဂျပန်ပြည်သူတွေက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အတုယူဖို. အရမ်းကောင်းလွန်းလို. ဖေ.ဘုတ် ထည်းကနေ ပြန်လည် ကူးယူထားတာပါ။ အားလုံးကိုလည်း ဖတ်စေချင်တဲ.ဆန္ဒလေးနဲ.ပေါ.။ မူရင်း စာရေးသူကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အဆိုးတွေထည်းက အကောင်းလို.ဘဲ တွေးလိုက်ပါမယ် ကျနော်ကတော.။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ၏ တိုးတက်မှု မှာ ထို နိုင်ငံသား များ၏ အခြေခံ စိတ်ဓါတ်ပင်ဖြစ် ပါတယ်။ မြေအောက်သယံဇာတ လုံဝ နည်းပါသော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ.ထိပ်သီး စက်မှုနိုင်ငံ ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ခဲ.တယ်ဆိုတာ ကျနော် သိချင်ခဲ.သည်။ အခုတော. ဂျပန်များ၏ အရုံးမပေးသော စိတ်ဓါတ်ကကျနော် နားလည် လိုက်ပါပြီ။အဏုမြူဗုံး ဒဏ်ကို အလူးအလဲးခံရခဲ.ပြီးနောက်ပြာပုံထည်းမှ ရုံးထွက် နိုင်ခဲ.သော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လည်း ကျနော်တို.နိုင်ငံသားများအားလုံး အားကျစေချင်ပါတယ်။ယခုလည်း သဘာဝဘေးဒဏ်များထည်းမှ အကောင်းဆုံး အန်တုကာ ပြန်လည်ထူထောင်မည်. ဂျပန်များ၏ စိတ်ဓါတ်ကို မြင်စေချင်ပါတယ်။
Posted by မောင်မောင် at 17:59